musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Rusununguko rwepamhepo runodzikira zvakanyanya kwegumi nerimwe gore mumutsara
Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • mhosva • tsika nemagariro • dzidzo • Egypt Kudzokorora Nhau • Entertainment • mafirimu • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • Iceland Breaking News • LGBTQ • mumhanzi • Myanmar Breaking Nhau • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Vietnam Kuputsa Nhau
Pakazara, dzinosvika makumi maviri nyika dzakavhara kupinda kweInternet pakati paJune 20 naMay 2020, iyo nguva yakafukidzwa neongororo.
Vashandisi veInternet pasirese vanosangana nekushungurudzwa, kusungwa uye kurohwa pamusoro pebasa ravo repamhepo.
Rusununguko rweNet mushumo runopa nyika zvibodzwa kubva muzana zana pachiyero cherusununguko rweInternet chinofarirwa nevagari.
Muna 2021, vashandisi vakatarisana nekurohwa chaiko mukutsiva kwavo online zvinyorwa munyika makumi mana.
Rusununguko rwepamhepo rwakadzikira pasirese kwegore regumi nerimwe zvichiteerana, maererano neshumo regore "reRusununguko paNet", rakaburitswa nhasi.
Kupa mufananidzo wakashata werusununguko rwe digital muna2021, chirevo chakataura kuti vashandisi veInternet munyika inowedzera yenyika vakatarisana nekushungurudzwa, kuvharirwa, kutambudzwa zviri pamutemo, kurwiswa uye kufa nekuda kwezvavakaita pamhepo mugore rapfuura.
Chirevo chakati kudzimwa kweInternet muMyanmar neBelarus kwave kwakaratidza kwakaderera nzira mukutambudzika kwekudzora rusununguko rwekutaura pamhepo.
Rakaunganidzwa neUS yekufunga-tangi Freedom House, chirevo chinopa nyika zvibodzwa kubva muzana zana padanho rerusununguko rweInternet runofarirwa nevagari, kusanganisira danho ravanotarisana naro nezvirambidzo pane izvo zvavanogona kuwana.
Zvimwe zvinhu zvinosanganisira kuti pro-hurumende trolls inotsvaga kushandisa makwikwi epamhepo.
"Gore rino, vashandisi vakasangana nekurwiswa kwemuviri kutsiva mabasa avo epamhepo munyika makumi mana," akadaro mushumo, "rekodhi yepamusoro" kubvira pakatanga kuteedzera makore gumi nemana apfuura.
Mienzaniso yaisanganisira mudzidzi weBangladeshi akarara muchipatara mushure mekurohwa kunzi "mabasa anopesana nehurumende" pane vezvenhau, uye mutori wenhau weMexico akaurayiwa mushure mekuisa vhidhiyo paFacebook achipomera chikwata chehumhondi.
Zvakare, vanhu vakasungwa kana kutongerwa zviito zvavo zvepamhepo mu56 kunze kwenyika makumi manomwe dzakafukidzwa neshumo - rekodhi 70 muzana.
Ivo vaisanganisira vaviri vanofurira veIjipita vakasungwa muna Chikumi nekuda kwekugovana mavhidhiyo eTikTok aikurudzira vakadzi kuti vatevedze mabasa pane ezvehupfumi.